Gị iTunes-aghọ ntugheriukwu na a ọgbaghara ruru ọtụtụ oyiri songs? Nwere nnukwu music collection, ma ọtụtụ songs uche ID 3 ọmụma, dị ka na-ese, album, track nọmba, genre, na ndị ọzọ. Ọ bụ ezie na iTunes ike ibudata ụdị ozi a na-akpaghị aka, mismatching itịbe site n'oge ruo n'oge. Na album artwork, ihe dị mkpa n'ihi na mma visual mmetụta na management, bụ kpam kpam-efu. Kedu ihe ka njọ, i kwesịrị ikwugharị na ịpị otu song na-eche ka ya ọmụma na-egosi oge ọ bụla. Na kwa, ị pụghị iri ihe ọmụma nile ga-eso unu mgbe egwu na-akpọ music na ndị ọzọ Player ma ọ bụ na-ebufe ka obere ngwaọrụ. Ọ bụ oge na-esi gị iTunes iji ugbu a. Here're ụzọ abụọ ka iTunes Library cleanup.
Method 1. Hichaa iTunes oyiri Songs na idozi Music ID 3 Info na a Ngwá Ọrụ
Method 2. Hichaa iTunes oyiri Songs, Movies, Akwụkwọ, égwu na ndị ọzọ n'ihi Freel
Hichapụ oyiri songs na idozi efu music ID 3 Ama, e nwere nri ngwá ọrụ gị. Wondershare TunesGo maka Android (Win) ma ọ bụ Wondershare TunesGo maka Android (Mac) dị mfe na-eji iTunes cleanup software, na-enyere ịchọta si oyiri songs na songs na-efu ID 3 ọmụma na ọcha ha effortlessly.
Soro Nzọụkwụ na-nzọụkwụ Guide na-esi Hichaa iTunes Library
Nzọụkwụ 1. Download na Wụnye TunesGoon Mac na PC
Pịa download bọtịnụ ibudata na wụnye Mac ma ọ bụ Windows version nke TunesGo. Ẹkedori ya. iTunes ga-oru oke. Mgbe ahụ, nke a software ga-emere na nri iTunes.
Nzọụkwụ 2. Hichaa iTunes Library
Na isi window, na-aga Hichaa iTunes Library. Mgbe ahụ, TunesGo ga-akpaghị aka-achọpụta rụọ gị iTunes Library na-egosi gị N'ihi banyere oyiri songs na songs na-efu ID 3 Ama.
Pịa Hichaa. Na mmapụta dialog, pịa Hichaa ọzọ. Mgbe ahụ, TunesGo amalite nhicha iTunes.
Method 2. Hichaa iTunes oyiri Songs, Movies, Akwụkwọ, égwu na ndị ọzọ n'ihi Free
Ọ bụrụ na ị na-adịghị amasị eji ihe ọ bụla ngwá ọrụ ma na-achọ ọcha iTunes duplicates onwe gị, i nwere ike ịgbalị otú a. Soro nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ndu n'okpuru.
Nzọụkwụ 1. Run iTunes na pịa Music, Movies, Akwụkwọ, égwu, wdg n'okpuru Library. Cheta na: The Nzọụkwụ na cleanup music bụ otu na-nhicha nkiri, akwụkwọ, na-eji ngwa duplicates. Ebe a, m dị nnọọ na-ọcha iTunes music dị ka ihe atụ.
Nzọụkwụ 3. All oyiri songs-egosi.
Nzọụkwụ 4. Right pịa ma ọ bụ ịchịkwa pịa a oyiri song. Na ndọpụta menu, pịa Hichapụ. A dialog Pop elu, pịa Hichapụ Song.
Copy Music si Mac ka Android
Olee otú Tinye Lyrics ka MP3 on Mac
Easy Ụzọ Detuo Music si iTunes ka Flash Drive
Olee otú ndabere iMessage na Bulk on Computer enweghị iTunes
Top 3 Free iTunes Lyrics Wijetị maka Mac
Otú nyefee iTunes Music ka ọzọ Computer
> Resource> iTunes> esi ọcha Up iTunes Library